Creative Writing » ​စောင့်​ချက်​တဲ့ ထမင်းအိုး ကြာတယ်​	17
​ရွေး​ကောက်​ပွဲပြီးတာ ​လေးရက်​ ထဲ​ရောက်​​နေပြီ ။ အရင်​လုပ်​ခဲ့တဲ့ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ​တွေတုန်းက ဒီ​လောက်​မကြာခဲ့ဖူးမှတ်​တာပဲ ။ ​စောင့်​ချက်​တဲ့ ထမင်းအိုး ကြာတယ်​ ဆိုလားပဲ ။ တစ်​ခုခု​ကြောင့်​ ထမင်းချက်​တာ​နောက်​ကျ က​လေးက ထမင်းဆာတယ်​ တစ်​ဂျီဂျီလာလုပ်​​နေရင်​ ပိုကြာတယ်​ထင်​ရတာမျိုး​ပေါ့ ။ ​အောင်​မြင်​မှုနဲ့​ဝေးလို့ ​အောင်​မြင်​ခြင်းကို မွတ်​သိပ်​​နေတဲ့ပြည်​သူ​တွေ စိတ်​မရှည်​တာလည်းအဆန်းမဟုတ်​ ။ ဒီမိုက​ရေစီ စစ်​စစ်​ကို အိပ်​မက်​ခဲ့တာ ၂၇ ရှိပြီ​လေ ။ တစ်​​ရေး​လောက်​အိပ်​ပြီး ဒီမိုအိပ်​မက်​ ဆက်​မက်​လိုက်​ကြပါဦးလို့ အချိန်​တန်​​တော့လည်း ကိုယ့်​လက်​ထဲ​ရောက်​လာမှာပါ ။ ဘယ်​သူမှ လိုအပ်​တာထက်​ အချိန်​ဆွဲလို့ မရ​ရေးချမရ ။ ​နေ၀န်းနီ
မှတ်​ချက်​ ။ ​ကော်​နက်​ရှင်​​ကြောင့်​ပို့စ်​မတင်​နိုင်​​သေးရာ ​နေ့လည်​ ၁၂ နာရီ ​ကျေငြာချက်​ပါ ထပ်​​ပေါင်းထည့်​လိုက်​ပါတယ်​ ။ About naywoon ni
kai says: မီးသွားထိုးရင်..ထမင်းအိုးတူးမယ်…
naywoon ni says: ကျုပ်ကတော့ အဲ့ကိစ္စမပူဘူး ။ အစိုးရသစ် အလွှဲအပြောင်း အဆင်ပြေဖို့ပဲ ပူတယ် ။ ဒီလို အပြောင်းအလဲမျိုး တစ်ခါမှမကြုံဖူးလို့ အားလုံး ရင်တစ်ထိတ်ထိတ်စောင့်မျှော်နေကြရတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မိုက်သဗျာ။ တင်စားချက်က။ အခုတော့ ၁ ယောက်ကျန် ပါ အဘနီ ရေ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီထမင်းအိုး က တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကျွေးမှာ ဆိုတော့ ၆ လလောက်တော့ စောင့်ချက်ရမှာပေါ့လေ
Alinsett @ Maung Thura says: နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းမှာ
13 November 2015 12:50(+0630) http://2.bp.blogspot.com/-GgehhAjG2nY/VkWA2xeptjI/AAAAAAAAOew/U-XfqAymCmo/s400/2.jpg
Alinsett @ Maung Thura says: http://1.bp.blogspot.com/-IGbkBoqKEE8/VkV9yZI6fQI/AAAAAAAAOek/iWq8Z9-BBm4/s400/1.jpg
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘေးမှာ ကပ်ဘူးလားး??
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်
kai says: နာမယ်တွေသာ တန်းစီရေးပေးကြပါ..။
ဒေါ်စုသက်သာအောင်ပါ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဘွား​တော်​ ​ပြောသွားတဲ့ ​နောက်​ဆုံးစကားကို​ထောက်​ချင့်​ရရင်​ဖြင့်​ သူစိတ်​ကူး ကိုအ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​​ပေးမဲ့ သမ္မတ ဖြစ်​ရမယ်​ဆို​တော့ အသက်​အရွယ်​အားဖြင့်​ ၅၀နဲ့ ၅၅ ကြား လွန်​​ရော ကျွံ​ရော ၅၇/ ၅၈ ထက်​မပို​လောက်​တဲ့ သူဖြစ်​မယ်​လို့ပဲထင်​မိ ။ ပြီး​တော့ သိပ်​ပြီး ပ​ရော်​ဖက်​ရှင်​ကျတဲ့ ပညာတတ်​ဆိုရင်​လည်း မဖြစ်​နိုင်​ဘူး ။ ဘာလို့လဲ ဆို​တော့ ဘွား​တော်​ အရိပ်​၀င်​ရမှာ​လေ ။ ဒီ​တော့ အသက်​အရွယ်​အရ ပြန်​ကြည့်​ရင်​လည်း ၈၈ ဂျင်​န​ရေးရှင်းထဲက တစ်​​ယောက်​​လောက်​ဖြစ်​နိုင်​မလား ​တွေးကြည့်​တာ​ပေါ့​နော်​ ။ အဲ့ထဲမှာ ဦးကိုကိုကြီးနဲ့ မင်းကိုနိုင်​ ဘယ်​သူ့ကို​ရွေးမလဲ အုံးစားကြည့်​ဦးမယ်​ ။
pooch says: ၁။ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်
……. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: .မိသား စု ဆရာဝန်လည်း ဖြစ်သူ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ကိုလည်း … ခန့်မှန်း စာရင်းမှာ ထည့်မှ ဖြစ်တော့မလိုလို….. ———————-
အဲဒီတော့ သမ္မတလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ အားလုံးက ကြည်ဖြူမယ်။ သဘောကျတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း ရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာတို့ လက်ခံတာပေါ့။ …….
Mike says: တားတား ဆော့ချင်တာ ဆော့လို့ရဘီ
NLD ……… အစိုးရဖွဲ့ ………နိုင်လို့ပေါ့ …….ခိခိ…ခီများဖွဘုတ်ကကူးလာတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: မိုက်​စ်​ ​နော်​ သူညား အုစ်​စာနဲ့ လုပ်​စားသွားပျံဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရင်တမ မ နဲ့ ရှိနေဆဲလို့ဘဲ ခံစားနေရ ပါသေးတယ်
ဦးကြောင်ကြီး says: အခြေအနေ………. မ………………… ကောင်း…………………………ဗူး…